Kedu ihe m ga-eji gba ịnyịnya ígwè m? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Uche uzo igwe ozo - uzo zuru oke
Uche uzo igwe ozo - uzo zuru oke
Kedu ihe m nwere ike iji gba ịnyịnya ígwè m?
Jide n'aka ijiigwe mmanu igwe, obughi WD40 ma obu ihe mgbaze ozo. Na-etinye ihe ọ bụla ọzọigwe kwụ otu ebena akụrụngwa gịnwere ike-eme ka ha bibie ngwa ngwa. Enwere m ndị ahịa gwa m na ha ejirila mmanụ moto, mmanụ nwa, mmanụ oyibo, mmanụ nri, wdg.Jenụwarị 31. Ọkt 2018
(Obi ụtọ na Music) - Lubricing yinye gị abụghị ihe dị mfe dịka ọ dị, ọ bụghị maka mmadụ niile nọ ebe ahụ. Ya mere, ebumnuche bụ isi nke ịgbanye silik gị bụ ịnwekwu ụgbọ okporo ígwè ndị na-arụ ọrụ nke ọma, nke pụtara obere esemokwu yana mbelata o yikarịrị ka ị nwere ike ịla n'iyi, gbakwunye ohere ị ga-eyi. Taa, anyị ga-eleba anya ụzọ dị iche iche ị ga - esi na - eke n'agbụ gị, yana mmanụ dị iche iche maka ha. (egwu obi ụtọ) Ka anyị buru ụzọ kwuo banyere Wet Lube, yabụ dị ka aha ahụ na-egosi, ọ dị mmiri mmiri mgbe i tinyere ya na nke bụ isi e mere maka ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma.
N'ihi ya, ọ na-adọta a bit ọzọ unyi, unyi, ájá, wdg Ma ihe dị mkpa, ọ na-anọ na ebe mgbe elu-igwe meghere na ọ na-amalite mmiri ozuzo. Agaghị asa gawa, n'ihi ya a squeaky bike.
Ọ bara uru maka oge oyi. Akọrọ ọnọdụ anyị na-ahụ nwere akọrọ Lube. Ihe niile adaa n’echiche, ọ bụghị ya? Agbanyeghị na akachaghị akọọ na ọ bụ maka ile anya, enwere mmiri mmiri n’ime ya.
Alt Ma ọ bụrụ na i tinye ya n'ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na yinye gị, mgbe awa ole na ole gasịrị, ọ na-ahapụ ihe mkpuchi ihe nkiri dịka akwara na njikọta yana na rollers. Ọ bụrụ n’itinyeghị ya nke ọma, ọ ga - adọta ọtụtụ unyi ugbu a, ọ bụrụ na i jiri nke a mgbe ọ dị mmiri mmiri, ọ ga - asacha ọfụma, na - eme mkpọtụ na - akpasu iwe onye ọ bụla yana onwe gị ma ghara inye ị arụmọrụ nke ị na - enweta, yana ikekwe na - agwụ ngwa ngwa. E nwere ugbu a mmanụ dị iche iche pụrụ iche na ahịa.
Ebumnuche ebumnuche dị n’azụ ha bụ otu ihe ahụ dị na abụọ gara aga anyị kpọtụrụ aha, mana n’ozuzu ha na-enye obere esemokwu mgbe ha na-anya ụgbọ ala, yabụ ha na-enye gị ohere ịga obere ọsọ ọsọ mana enweghị mbọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere UFO Drip si CeramicSpeed, ị nwere igwe kwụ otu ebe TS, Race Day Spray si Rex, lube si Rex yana ihe niile dị mkpa, ihe eji eme ihe, emere m ntakịrị ntakịrị oge gara aga m nwere ihu ọma ihu ọma tinye yinye na ihe agbaze tinye na wax, kpughere, na ya pụta na-ekwu maka onwe ha. Ma olee otu i si eji ha? Nke a bụ ebe m na-eleghị anya ndị kasị lezie mgbe ọ na-abịa bike nlekọta na-ihu ọma edebe gị drivetrain dị ka dị ọcha dị ka o kwere omume, ka ehichapụkwa anya ọ bụla ngafe mmanu, jiri a degreaser, na-eme ka ọ nnọọ enweghị ntụpọ.
Mgbe ahụ chọta gị njikọ pin ma ọ bụ njikọ na mgbe bugharia yinye azu azu ruo mgbe ị nnoo achọpụta na ejikọta pin na ala gbọmgbọm nke yinye, nke a dị ezigbo mkpa icheta. Na mgbe ahụ ọ masịrị m iji mmanu mmanu site na karama ahụ, n'ihi na ọ dịịrị m mfe itinye, enweghịkwa m aka na-agba ọsọ. Yabụ ị nwekwara ike ịchịkwa ole ọ na - apụta Ma m wee malite na njikọ njikọ ahụ yana naanị m na - etinye mmanu mmanu na igwe ọ bụla, wee wee gbaghaa pedal azụ azụ wee gaa n'ihu ruo mgbe njikọ njikọ ahụ ga - abịa n'ụzọ niile azụ, mgbe ahụ ịmara na i mechala zuru.
Ka ọ nọdụ nwa obere oge, yabụ naanị 20-30 sekọnd, na oge a, ịlaghachi azụ maka ihe dịka 30 sekọnd ma mee ka mmanu ahụ banye n'ime rollers na mkpịsị akwụkwọ, mgbe ahụ elekere ole na ole hichapụ ihe ọ bụla ị ga - eme n'èzí agbụ njikọ, ebe ọ bụ na ịchọghị ya ebe ahụ. Naanị ebe ị chọrọ mmanu dị n'ime rollers na pin. Ka anyị ghara ichefu aerosols, n'ihi na ha bụ nhọrọ mara mma nke ukwuu maka ndị na-ete mmanụ.
Onwe m, ahụghị m ha ka ọ dị mfe iji dị ka ihe dị na karama, nke ahụ nwere ike ịbụ n'ihi na m na-achọkarị ịpịgharị ihe ị na-ada karịa aerosol, mana na ịkpachara anya, ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma . Ma, olee ihe anyị ga-eme? Ọfọn, ọ bụrụ na ị nwere rotors rotors ma ọ bụ calipers na igwe kwụ otu ebe gị, ị ga-achọ ịnwale ma chebe ha pụọ ​​na agba ọ bụla na-enweghị isi site na aerosol.
Ya mere, nweta ụfọdụ uwe na ihu ọma na-ekpuchi ha. Otu ihe ahụ na-agakwa ebe a na - eme braking, yabụ gbalịa ma rụọ ọrụ site na breeki rim ka ị ghara inwe brakes dị njọ mgbe ị lụsịrị sistem gị. Ugbu a enwere usoro dị iche iche anyị nwere ike iji.
Nke mbu, na nke m choro, bu ichota enyi ma mee ya ka o laghachite ma jiri obere akwa jide ihe ahu ma weghazie onye obula. Ha emesiekwa ike na-arụrụ gị ọrụ siri ike, laa azụ. Dị nnọọ ka ọ dị karama mmanụ, ha na-amalite ma mechie n'otu ebe na eriri ala nke agbụ ahụ.
Uzo ozo bu ime ya n'onwe gi, o kariri oru ike, mana ka anyi lee ya anya, oburu na o bughi n'ezie otutu oru di. Ya mere, ọzọ dị nnọọ jide ma gbaa, ịgba, ịgba, wee laghachi azu, ịgba, ịgba, ịgba na ihe ndị ọzọ. Ewe obere oge, mana hey, ọ bụghị ihe egwuregwu ahụ.
Ugbu a ụfọdụ n'ime unu nọ ebe ahụ ga na-eche ihe kpatara na ụwa anaghị m agbapụ azụ na azụ wee tụgharịa cranks na ọkara kan ma ọ bụ jiri ọkara karama n'otu oge, nke ọma, maka nke ahụ, ihe efu, na ị maghị kpọmkwem ebe ọ na-aga ma, ị? “Kpọọ okwu aha, karama ahụ ma ọ bụ mmanụ aerosol nke mmanu ga-adịru ogologo oge. Ugbu a, dịka ọ dị na usoro ndị ọzọ, gbanwee cranks ole na ole tupu ihichapụ ihe ọ bụla na-ete mmanụ, ma ị ga-aga nke ọma, mana ihe m chọrọ ịma bụ otu esi agbanye mmanụ olu gị, kedụ ụzọ kachasị amasị gị si karama, site na mkpọ ma ọ bụ too ya, onye ma ka m mara na ihe ndị dị n'okpuru. Ọzọkwa, cheta na-amasị isiokwu a na-eso ndị enyi gị karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na onye na ha nwere a squeaky onye nwere yinye.
Kpọọ anụ ụlọ m asị. Ugbu a chetakwa ileta ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com.
Ma ugbu a, maka edemede ọzọ, oge a na-eme agbụ, nke ahụ ziri ezi, m gbanye agbụ na wax na-ekpo ọkụ, pịa ebe a n'okpuru.
You nwere ike iji WD40 dị ka igwe kwụ otu ebe?
Enwere m ike iji WD-40kalubenkemagbụ ígwè? Ọ bụghị.Gịekwesịghịjiri WD40dikayinye mmanukemgbeWD-40B NOTGH a eziokwummanuebe ọ bụ isijiridị ka ihe mgbaze ma ọ bụ nchara nchara.Mar 24 2020
Enwere m ike iji engine mmanụ dị ka yinye lube?
Ojiji nkemmanụ enginema ọ bụ abụba adịghị atụ aro ya ma ọlịyinyemmanu. Griiz wont banye n'ime O yiri mgbaaka na X yiri mgbaaka ma e jiri ya tụnyereyinyemmanu. Ebemmanụ enginena-adịru naanị ụbọchị ole na ole nke na-ebelata ndụ nke gịyinyena sprocket.
Taa, anyị ga-eleba anya na mmanụ dị iche iche anyị nwere ike itinye na draịva anyị yana mmetụta ha nwere ike. N'ihi ya, m meghere agbụ m, nke ejiri ya mee na nha ole na ole. Anyị ga-etinyekwa ụdị mmanu dị iche iche na ya wee mee ka ha mata ọtụtụ ihe dị na mpụga. (Egwú Dramatic) Nke mbụ na ndepụta anyị maka nhọrọ lube bụ Wet Lube.
Yabụ na karama ebe a, ọ na-ekwu na agbụ ahụ ga-anọ nwayọ ma dịrị mmiri n'ọnọdụ apịtị. Yabụ chee echiche gbasara oge oyi gị, ọ bụ ebe ahụ ka ọ dị. Ọ na-agba dị ka mmiri mmiri ma na-achọ ịrapara n'akụkụ nke ahụ site na mmanụ gbara ọchịchịrị na-anọdụ ala na draịva gị, ọ na-emekarị.
Nchedo, sie ike karịa akọrọ mmanu, ma ike-ntakịrị imetosi, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-etinye ukwuu. Ọzọ anyị nwere mmanu akọrọ, yabụ nke ahụ bụ uzuzu uzuzu ọnọdụ ịmịiko gị. Ya mere, echere m banyere oge ọkọchị mgbe enweghị nnukwu unyi na apịtị n'okporo ụzọ a) Ugbu a, ọ na-ehicha karịa Wet Lube, mana ọ gaghị adịru ogologo oge ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe kpuchiri igwe kwụ otu ebe, ájá, ma ọ bụ mmiri slide na ọdụ n'elu yinye.
Ugbu a anyị na-aga na-agba ọsọ a ogbe nke anyị samples enweghị ihe ọ bụla mmanu, dị nnọọ ka a na-achịkwa. Mana maka ndị ọzọ ndị ọzọ, anyị agaghị eji ndị na-ete mmanụ aha, mana ihe anyị na-ajụ ọtụtụ. Ya mere, site na ebe a na-eri nri, anyị nwere mmanụ oliv.
Mbụ pfụkwaru g'ọ dụ anyi mma. Na-esote, anyị nwere ndị na-edozi maka onye ọ bụla Mkpesa, nke dị n'elu mmiri dị nsọ na gin na tonic, n'ezie ọ bụ WD-40. Ugbu a, nke a ka bụ nhọrọ maka ụfọdụ ndị na-anya n'okporo ụzọ na-achọ ezigbo ọrụ nke na-anọ jụụ, ma ọ bụrụ naanị ihe dị ka nkeji 30.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị na-agba ụgbọ mmiri mara mma ebe a, mana anyị anọghị kpamkpam NASA. Ya mere, anyị nwere igbe dị egwu anyị dị mfe na m ga-etinye unyi, apịtị ma ọ bụ ọbụlagodi naanị mmiri na anyị ga-agbụ anyị agbụ, anyị ga-atụ anya inye oge agbụ iji mee ka mmanu ha na-egbu mmiri wee nwee olileanya iji gosipụta kedu ka ị ga-esi akpa agwa n'ụwa n'ezie. Otu nnukwu ihe dị iche tụnyere ihe ị nwere ike ime na gị onwe gị igwe kwụ otu ebe bụ na anyị agaghị ehichapụkwa ngafe mmanu.
Olileanya na nke a bụ imebiga ihe ókè uru ọ bụla ma ọ bụ ego ọ ga-ekwe omume site na mmanu ahụ n'onwe ya. Ugbu a, ị nwere ike ịgwa m na m nwere ụdị akwa drọ ihe abrasive nke ị hụrụ na-egbochi draịva gị, na n'eziokwu niile, agaghị m anwale. Echere na nke a bụ nnwale dị mfe iji gosi gị uru na ọghọm nke mmanu ọ bụla, yana ụyọkọ ụyọkọ dị ka ị nwere ike ịkọwapụta ozi ịchọrọ tupu ịmalite ya na ọnọdụ nwere ike ịdị n'ezie karịa ebe a na obere obere Tupperware containers m nwere ike a ole na ole narị grams nke kasị mma English apịtị m nwere ike ịhụ.
Ekwuru m, apịtị, ọ bụ ihe ruru unyi, aja na-agbanwe agbanwe ugbu a. Na otu n'otu oge, m na-agabiga ụdị mmanụ dị iche iche na ịgbakwunye yinye. Ya mere, m na-amalite na Dry Lube.
Naanị n'ime, anaghị m atụ egwu. Ma mgbe ahụ (na-ama jijiji) Echere m na nke ahụ bụ ìgwè mmadụ ahụ. Ya mere, m ga-egwupụta agbụ m.
Obere bit nke mmanu. M na-aga ịkụ aka ya a obere. (Akụ aka) N'ihi ya, m na-aga gbapụta na e na-eme otu ihe ahụ na Wet Lube.
Na ọ na-aga. Ekebe igbe ahụ wee pụọ! (rattling) Ya mere, m ga-agabiga agbụ ndị ọzọ ma megharịa otu usoro ahụ. Na mgbakwunye na unyi, ana m agbakwunye ugbu a ngalaba nke agbụ maka ụdị mmanu ọ bụla n'ime mmiri apịtị na mmiri dị ọcha iji gosipụta mmetụta nchekwa dị iche iche nke ụdị mmanu ọ bụla dabere na gburugburu ebe obibi. (rattling) Naanị ngwa m kwere ka m kpọọ n'ụlọ akwụkwọ bụ maracas, yabụ enwere m ọtụtụ omume na das, enweghị m ike ịtụkwasị obi na ihe ọ bụla dị oke egwu. (rattling) (egwu dị egwu) Ya mere, m ga-ahapụ ndị a ka ha mee ihe ha n'abali. aga m alaghachi echi ka m hụ w hat m hụrụ na echere m na ha ga-adị mma echeghị m na ha chọkwuru m ebe a ọzọ ma anyị ga-enyocha echi otu ụbọchị mgbe e mesịrị.
Yabụ na ọ bụ ụbọchị ọhụụ na GMBN Tech HQ na anyị ga-elele ụdọ anyị, yabụ na mbụ o juru m anya na agaghị m ahụ nchara ọzọ. Nke ahụ bụ maka onye ọ bụla. Mana echere m ihe m na-ekwu na nke ahụ, bụ mgbe m wedara ha, ị maara na echere m na degreaser nwere ụfọdụ ihe nchebe echekwara ma ọ bụghị maka ihicha ha kpamkpam.
Ehichapụrụ m ha ma gbalịa ime ka ọkpụkpụ ha kpoo ka o kwere mee. Ma m ka na-eche na nke a degreaser nwere ụfọdụ mmapụta Njirimara. Ya mere, ka anyị lee nsonaazụ ya.
Anyị ga-amalite na nke anyị kpọrọ nkụ. Ugbu a, akọrọ, uzuzu uzuzu bụ n'ezie, ị maara, o nwere ájá n'elu ya. Ma obu aja n’onwe ya, obughi ya bu apịtị n’onwe ya takporo ma gbazee dika uzuzu.
Ya mere echere m na ijiri obere eriri ma ọ bụ mgbe ụgbọala ahụ malitere ịmalite, m ga-eche na nke ahụ ga-ada kpamkpam. Na nke a uwe n'ezie mara mma masịrị na-ewere na ọ bụghị dị ka anyị na-ekpochapụ ngafe e mesịa. Nke ahụ na-abanye na Dry Lube.
Gaa na nke nwere apịtị. Ọzọ yiri, ma ọ bụrụ na ma eleghị anya, m chere n'ezie na ọ napụrụ ezigbo a bit si kpọrọ nkụ Lube. Iji lee ya anya.
Ma mmiri ahụ n’onwe ya, nke ọma, ọ dị ka ọ dị mma ma dịkwa ọcha. Nchara ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ọ naghị adị ya ka mmanụ gbara agba karịa.
Oh, enwere obere, ntakịrị, ma eleghị anya, wax wax na ya. Ọzọ anyị ga-aga Wet Lube anyị. N'ihi ya, ọ kpọrọ nkụ ozugbo.
Ya mere na ihe dị iche, ọ bụ ụdị nke mkpọchi dị ka mmanụ na-agwakọta ya na ájá. Behindhapụ ụdị ụfọdụ nke mmiri jupụtara unyi. Ugbu a, ka ị na-agagharị n'okporo ụgbọ ala gị, ị mara na ihe dịka ihe nkedo gị na-ewepụ unyi ahụ na njikọ gị.
Ma nke ahụ bụ ọrụ njikọ njikọ ga-arụ, nke na-apụtaghị obere arụmọrụ, mana ọ ga-eme ka ike gwụ gị ma ọ bụ mechie ụgbọ okporo ígwè gị. Na-esote, anyị lere anya na apịtị, ọ dịkwa ezigbo mma. Na-ewere na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, mmiri apịtị.
Enwere n'ezie mmanu kwesiri mmanu nke fọdụrụ na ya, ọ masịrị m nke ukwuu na ọ ga-ewe na-enweghị naanị ikpuchi ya kpamkpam. N'ihe banyere mmiri, ọ ka dị ka ọ dị ya ka ọ dị mmanụ nke bụ n'ezie, na-adọrọ mmasị n'ezie mmiri ole ọ nwere ike iweghachi. Ọzọ anyị ga-aga Volksmeister WD-40, nke yiri Real Real Lubricant.
Ọ dị ka ọ hapụ ntakịrị ntụ ntụ. Ma n'eziokwu, ekwesịrị m ịsị na WD-40 bụ otu n'ime ihe kachasị adọrọ mmasị na bọọdụ ahụ. Ọ dị na ọkọchị, ọ naghị enwe ọtụtụ.
N'ime apịtị ọ ka dị mma nke ukwuu yana ọbụlagodi ihe nchekwa ọkụ. N'ime mmiri ọ dị ka agbụ ọhụrụ. Echere m na ihe gbasara WD-40 ọ bụ na ọ na-ere ọkụ ike gị ngwa ngwa.
Ọ bụghị na ọ bụghị mmanu dị oke mma, ọ naghị adịru ogologo oge n'ihi na, nke ọma, nke ahụ abụghị ihe e mere ya. Banyere mmanụ oliv, m na-ekwu ule nke anyị niile kwesịrị ịma. N'agbanyeghị na-esi isi ụtọ nke mere na ọ bụ ya.
Mana o yikarịrị, m ga-asị na ihe kachasị ekpuchi, ụzọ mmanụ gwakọtara na apịtị, apịtị ahụ ka dị mmiri mmiri. Ọbụna na Wet Lube, apịtị dị ụdị, nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụ n'ájá, ọ bụghị ụdị ụdị mmiri mmiri a mịrị amị. Ma ọ bụ n'ezie, ee, ụdị akpọnwụwo ma nwee ike ịla n'ájá.
Ọ bụ ezie na nke a dị mma nke ukwuu ka ọ dị n'ụdị apịtị. Na otu aka ahu, tinyere mmiri apịtị, a ka nwere mmanu mmanu n'ime ya. Ọ dị mma, ọ ga na-esi isi ya.
Ma ee, ọ dị mma. Ma na nke ahụ, naanị mmiri ahụ, ọ ka dị ka ọfụma ọhụụ mara mma, mana ugbu a mmanụ na mmiri anaghị agwakọta nke mere na ọ bụghị ihe ijuanya m. Ma mgbe ahụ, jiri usoro nnwale anyị, dịka ị ga-atụ anya ya, m na-ekwu, enwere ike ihu elu anaghị akọ akụkọ dị ukwuu.
Mana nke a bụ mmiri anyị apịtị. Ma ị nwere ike ịnụ ụfọdụ isi ike na Njikọ. Nwere ike iche na ọ na-ebuwanye ibu ka ị na-agafe ụkwụ.
Ọfọn, ọ mara mma ịkọ, n'ezie. Akọrọ Lube yiri ka ọ ga-aka mma maka ọnọdụ ndị a kpọrọ nkụ. Wet Lube, nke ọma, ọ dabere na ọnọdụ mmiri ka mma.
Ma ha ga-akwụkwu ọzọ. Ha agaghị agbapụ na ike gị ozugbo. WD-40 na-ahụ anya dị oke egwu, dịka m kwuru, mana m na-echegbu onwe m ogologo oge ọ ga-anọ ebe ahụ.
Mmanụ oliv na-esi isi dị ịtụnanya mana enwere m ụjọ maka oge ọ ga-anọ ebe ahụ. Na, nke ọma, enweghị mmanu n'ozuzu ya, ọ naghị eme ọtụtụ ma ọlị. Ma enwere otutu esemokwu n'ime njikọ ndị ahụ.
Ike gwụrụ m niile akwụkwọ akụkọ siri ike nke na-eme ebe a ma chọọ ịlaghachi na igwe kwụ otu ebe. Lelee edemede a m mere na enweghị tube na mbanye anataghị ikike. Ọ bụ ederede ogologo mana ọ mara mma nke ukwuu ma ana m akwado ile ya.
Dị ka oge niile, biko echefula ịmasị na ịdenye aha n'ihi na ọ na-eme ka chanel na-aga. Anyị ga-ahụkwa gị oge ọzọ, daalụ.
You nwere ike iji mmanụ 3in1 na ígwè igwe kwụ otu ebe?
Iho mmanu ya
IjiWD40 ma obu3-in-1 mmanụọ nwere ike ịdị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya mana ọ gaghị abụ ihe na - aga nke ọma ma mekwaa unyi na akwakaosisikaiheyinyena akaghi akaeyi.Sep 12 2017
Olee mgbe i kwesịrị ịtụ gị bike yinye?
IgweNkuzi na-atụ aro ihicha nalubricating gị igwe kwụ otu ebe siụgbọalayinyeọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ọnwa iji nọgide na-enwe ezigbo arụmọrụ na nchedo. Iheyinyena drivetrain bụkarị ndị dirtiest akụkụ nkeigwe kwụ otu ebe gị, na unyi a bụ akụkọ ọjọọ makaigwe kwụ otu ebeogologo ndụ na arụmọrụ.Mar 21 2019
Ihe WD-40 yinye ọ bụla dị mma?
5.0 n’ime kpakpando 5 Dị mmaigwe kwụ otu ebe! Agbalịrị m ọtụtụigwe kwụ otu ebe- ngwaahịa a na - arụ ọrụ kachasị mma. M na-etinyekarị tpyinyewee hichapụ ngafe na towel akwụkwọ.
Ekwesịrị m ịta mmanụ ịnyịnya ígwè m?
Ọ bụrụ na ị na-a Ugboro onye na-agba, na-eji gịigwe kwụ otu ebeọtụtụ ugboro n'ime izu, gịigwega-erite uru site na nhicha mgbe niile nammanunke mbanyeyinye.IgweTutor na-atụ aro ihicha na mmanu gịigwe kwụ otu ebeụgbọalayinyeọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ọnwa iji nọgide na-enwe ezigbo arụmọrụ na nchedo.Mar 21 2019
Enwere m ike iji mmanụ ụgbọ ala lube igwe kwụ otu ebe m?
Enwere m ike iji mmanụ motonwee ayinye lube? Gịnwere ike iji mmanu moto. Agbanyeghị, akwadoghị ya dịka nke ammanụdịkwa oke oke ma ọ gaghị abanye n’ime akụkụ ahụ.Mkpebi 21 2020
Enwere m ike iji mmanụ esi nri na igwe kwụ otu ebe m?
Na-agba ume ayinyenammanụ ihe oriri
Mgbe ị na-ete gịyinyenammanụ ihe oririga-arụ ọrụ maka obere oge (ọ bụmmanụmgbe niile), ọ bụ n'ezie ihe amamihe. Ọ ga - agbachasị ụgbọala gị ngwa ngwa karịa mmanụ eji eme ihe, na - adọta unyi ọzọ, ọ ka mma ịhapụ na kichin. g.
Ekwesịrị m iji mmiri ma ọ bụ akọrọ nkụ lube?
Akọrọ lubesbụ maka ọnọdụ kachasị kpọọ nkụ na ịdị ọchaagbụ.Wet lubesnwere ikeejiafọ niile, na-enye mma ka mma ma nwee ogologo ndụ kacha ogologo. Mammiri ma ọ bụ ọkọchị, ọ na-abụkarị ajụjụ gbasara oge na mbọ ị chọrọtinyena. nke ọ bụla, jide n'aka na ịjirikammanu- nke giyinyega-ekele gị maka ya!Sep 18 2020
Enwere m ike iji Vaseline na igwe kwụ otu ebe m?
Mmiri ahụ nwere ihe abụọ -Vaseline, nke gosipụtara na ọ bụ otu n'ime ndị na-ete mmanụ kacha mma, na ụdị mkpa pụrụ iche nke na-enyere aka inwetaVaselinemiri n'imeyinyenjikọ. Ozugbo thinner evaporates,Vaselinegameekasị mma ime ka gịyinyena-agba ọsọ nwayọ.Mar 22 2018
Kedu nke bụ mmanụ kacha mma maka igwe kwụ otu ebe?
Mmanụ ọkụ. Mmanụ ọkụ na-abata aka mgbe ịchọrọ mmanu iji banye n'ime ihe kachasị omimi nke igwe eletrik gị. A na-etinyekarị ihe ndị a site na sirinji nke kachasị ịbanye. A na-etinye ya n'ọrụ site na ịpị ụkwụ azụ azụ maka nkesa kwesịrị ekwesị. Ihe kacha mma, na nke a, Tri-Flow na Phil Wood Tenacious Oil.
Enwere ndị nọchiri anya mmanụ agbụ mmanụ ma ọ bụ mmanụ?
N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ọ bụghị mmanu mmanu ọ bụla kama ọ bụ ihe nnọchi maka ọrụ nke mmanu mmanu ya bụ ihicha agbụ na akwa dị ka sọks. Maka nhicha agbụ agbụ m jiri mmanụ na-esi nri wee tinye ezigbo mmanụ n'ikpeazụ, ọ na-arụ ọrụ.
Nwere ike iji chainsaw mmanụ na igwe kwụ otu ebe?
Enwere m ike iji Chainsaw mmanụ na ígwè m yinye? Eeh. Nwere ike iji chainsaw (mmanya) mmanụ dị ka mmiri igwe kwụ otu ebe, ọ ga-abụ nke kachasị mma maka ịnya ihu igwe na-adịghị mma ebe ị chọrọ mmanụ nnyapade nke na-agaghị asachapụ na mmiri ozuzo ma ọ bụ ọnọdụ mmiri.